ကပ္ပိယဆွမ်းခံကြွလာပြီ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ကပ္ပိယဆွမ်းခံကြွလာပြီ	12
- ကပ္ပိယ သာဂိ
Posted by ကပ္ပိယ သာဂိ on Jun 29, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
တစ်ရွာလုံးကလူတွေ ကျုပ်တို့ကျောင်းကိုသတိမရကြဘူးဆိုတော့ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲရွာထဲကိုဆွမ်းခံကြွခဲ့ရတယ်။ဘယ်နှယ့်လဲ လောင်းကြမယ်မို့လားဒကာတို.။အဲ ဟုတ်ပေါင် ကြိုဆိုကြမယ်မဟုတ်လား။
ရွာထဲကို ဝင်မယ်လုပ်တော့ ကျုပ်ကို ကိုရင်ကြီးက အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာလိုက်တယ်ဗျ၊ အဲဒါကတော့ အရက်အရမ်းသောက်တဲ့ဦးပေ၊ဦးဗိုက်၊ဖွံဘုရင်ငကြောင် အဲပြီးတော့ မိန်းကလေးဆိုရင်လည်း အပျိုမဟုတ်တဲ့အိမ်ကိုဆွမ်း မခံနဲ့တဲ့။ ဩော် အရေးကြီးတဲ့သူကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မေ့နေတယ်၊ ကိုရင်ကြီးရဲ့နာမည်(အဲ ဘွဲ့ပြောတာ) ကရှောင်နိုင်မှလွတ်မဲ့အသေဝနာစ ဇောက်ထိုး တဲ့။ တာ့တာ…..။
About ကပ္ပိယ သာဂိ
သာဂိ ကပ္ပိယ has written3post in this blog.
View all posts by ကပ္ပိယ သာဂိ →	Blog
ကပ္ပိယ သာဂိ says: အစောကြီးထ တီး(အဲယောင်လို့)ဆောရီးဗျို့။ အရင်ရေးထားတဲ့မိတ်လိုက်စာ အမ် မှားသွားဘီ..မိတ်ဆက်စာမပေါ်ဘူးဆိုပြီးရေးတင်လိုက်တာ အခုမှအရင်စာကိုပြန်တွေ့လို့ သာဂိကို ခွေးကော၊ဘာကောညာကော အကုန်လွှတ်ကြပါကုန်.။
ဒီလိုပါ၊ သာဂိနောက်ရေးမယ့်ပိုစ့်တွေကြတော့ သာဂိရဲ့0KBမျှသာရှိတဲ့မယ်မိုရီထဲကနေပြီးတော့ဗလာဟာသလေးတွေကိုနတ္ထိရီရအောင်လို့တတ်ယောင်ကားဖျစ်ညှစ်ပြီးတော့ရေပေးပါ့မယ်။ သာဂိရွာမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကိုဟာသမဆန့်တဆန်နဲ့ သာဂိနှင့်၎င်း၏အပိုင်းအစများပေါ့။ ဇာတ်ကောင်တွေက တော့ရွာသားတွေကိုပဲသုံးပေးလိုက်မယ်။ပထမဆုံးစောင့်ဖက်ရမှာကတော့“သာဂိနှင့်ကြက်သရဲမောင်ပေ” တဲ့ စောင့်မျှော်အားပေးကြနော်။
ကပ္ပိယ သာဂိ says: ဩော်မေ့နေလို့ဗျ။ ဒီမိတ်လိုက်စာမှာကိုရင်ကြီးကဘွဲ့ပြောင်းထားတယ်ဗျ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့နောက်ရေးမယ့်“ဖြစ်ရလေ ရှင်းသန့်နွယ်ရယ်” ပို့မှာအုကြောင်နဲ့သာဂိနဲ့အားပြိုင်ရဦးမှာမိုပါ။
htoosan says: ကပ္ပိယ ဆိုတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေး လည်း မဟုတ် ခပ်ကဲကဲကန်လေးလည်း မဟုတ်တော့ ဘယ်သူမှ ဆွမ်းထွက်မလောင်းလိုက်ဘူးထင်ပ ။
ဒုတိယအကြိမ် တစ်ပါတ်ပြန်အော်ရတယ် ဆိုတော့…
မောင်ပေ says: ကျုပ်မောင်ပေ မန်းဂေဇက်မှာ စာရေးနေတာ ၁နှစ်နဲ့၂လ ကျော်ရှိပါပြီ။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်များအတွင်းမှာ ကျုပ် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဘယ်သူမှ ကျုပ်နာမည် မောင်ပေဆိုတာနဲ့ မရေးခဲ့ကြပါဘူး။
ကပ္ပိယသာဂိ ဆိုတာ ဂေဇက်ကရှိပြီးသားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အကောင့်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ကျုပ်ယူဆပါတယ်။
ကပ္ပယိ သာဂိ ကို မောင်ပေ ဆိုတဲ့နာမည်ကို မသုံးဖို့ ဒီကွန်မင့်ကနေ ကန့်ကွက်တားမြစ်ပါတယ်။
သာဂိဆိုတာ ရှိနေပြီးသားမန်ဘာဆိုရင်တော့ အရင်အကောင့်နဲ့ ကျုပ်နာမည် ကို ရေးပါ။
မမ အညာသူ says: အန်ကယ်ဇောက်ကတော့အလိုလိုနေရင်
ဇောက် ထိုး says: အာရတီ ၀ိရတီ ဘွဲ့ရ ကပ္ပိယကြီး ဦးသာဂိရေ…
သုခ ကာမဿ ဘိက္ခုနော။
သုခကာမဿ ဘိက္ခုနော… ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်တဲ့ ရဟန်းတွေဟာ.
ဒွိသန္တကံ…. နှစ်ပါးဆိုင် ကျောင်းမထိုင်ရဘူး…(ကျောင်းလုနေလို့ စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်။)
ကပ္ပိယဉ္စ….. ကပ္ပိယ ဆိုတာလဲ ဆရာလုပ်တတ်လို့..ဘုန်းကြီးမကောင်းကြောင်းရှောက်ပြောတတ်လို့ စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်။ ကျောင်းကဟာစားနေပေမယ့် ကိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုလဲ အနိုင်ကျင့်တတ်တယ်။ ကိုရင်ကျောင်းသားမမြဲဘူး။ ဒါကြောင့် ကျောင်းမှာ ကပ္ပိချကို မမွေးရဘူး။
မယ်သီလဉ္စေ၀… မယ်သီလတွေကလဲ စကားများပြီး ရန်ဖြစ်ကြလို့ စိတ်မချမ်းသာရဘူး။
ဖိုးသူတော်စ…. ဖိုးသူတော်တွေကလဲ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့မတည့်လို့ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။
နိက္ခမံစ…. ကြီးမှဝတ်တဲ့ တောထွက်တွေကလဲ မနေတတ်မထိုင်တတ်မို့ စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်။
ပရိဝဇ္ဇေယျ… ဒါကြောင့် အဲဒါတွေကို ဝေးဝေးရှောင်ကြပါတဲ့ဗျာ….
သားဦး၊မြေးဦး says: ကိုဇောက်ထိုးနဲ့ ဘာတော်စပ်ပါလိမ့်။
King of Secrets (Bo Min) says: မဆိုးပါဘူး
snow white says: စနိုးအိမ်ဆွမ်းခံကြွလုိ့ကတော့ နေ့တိုင်းကြက်ဥကြော်ကန်စွန်းရွက်ကြော် ကြက်ဥကြော် အဲ့၃မျိုးဘဲဆွမ်း စားရမယ် စနိုးဘာမှမချက်တက်လို့ ။
မဂွတ် ထော် says: ဆွမ်းခံကြွလာတာကြားတော့
ဖိုးထောင် says: ဦးပေက မူပိုင်ခွင့်တင်သွားပြီဗျ ဟုတ်ပဟုတ်ပ
ကြောင်ကြီး says: သာဂိ
Comments By Postအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - uncle gyi - အလင်း ဆက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Silver Twigအဟံ ပထမံ - nature - padonmarကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etoneမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - အလင်း ဆက် - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - padonmar - မောင် ပေရွာသူ/သားများ အတွက် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေ၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaအတု - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်သဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - အရီးခင်လတ် - Mr. MarGaလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - အလင်း ဆက် - သူကလေးသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - mee lay - Mr. MarGaရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - MunetezEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities